Baolina kitra - CHAN 2020 :: Hiezaka ny hanindry mafy an’i Namibia eny am-boalohany ny Barea • AoRaha
Baolina kitra – CHAN 2020 Hiezaka ny hanindry mafy an’i Namibia eny am-boalohany ny Barea
Vonona amin’ny ankapobeny ireo mpilalao mandra­fitra ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra (Barea) hiatrika ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Chan 2020). Feno ny ekipam-pirenena hifandona amin’i Namibia amin’ny alahady izao, eny amin’ny kianjaben’i Maha­masina, nanomboka omaly.
Efa tonga avokoa ireo mpilalaon’ny Fosa Juniors sy Cnaps Sport niatrika ny Lalao afrikana isan-tarika, tamin’ny alahady teo. Nanatanteraka ny fanazarantenany niaraka voalohany izy ireo omaly, teny Mahamasina. Nanazava Andriamanarivo Franklin fa: “ny lafiny fanafihana hatrany no mbola hamafisina farany mialoha ny fifandonana amin’ny alahady. Hiezaka ny hampiditra baolina faran’izay haingana no tanjona amin’io lalao mandroso io”.
Mahatoky ny ekipany ny mpanazatra, indrindra noho ny fidiran’i Jean Yves sy Besona avy ao amin’ny Fosa Juniors FC, ao amin’ny Barea. Hanamafy ny ekipam-pirenena ihany koa i Tsila sy Safidy ao amin’ny Elgeco Plus ary Romuald ao amin’ny Cnaps Sports. Mazava ho azy fa tsy tafiditra ao anatiny intsony i Elefoni, izay naratra nandritra ny fihaonana tamin’i Mozambika. Noesorina kosa i Frédéric sy Dahery noho ireo zava-bitany farany tsy dia naha­resy lahatra raha ny fanazavan’ny mpanazatra hatrany.
Lalao goavana no hatrehan’ny delegasiona malagasy. Hisy fepetra horaisina mba hisorohana hiala amin’ny fifanosehana sy fahafatesana. Mpitandro filaminana miisa roanjato mahery no hiandrai­kitra izany. Hanampy azy ireo ihany koa ireo olon-tsotra miisa roanjato mahery hitandro ny filaminana hatrany anatin’ ireo mpijery baolina rehetra.
Vavahady efatra no hiso­katra amin’io fotoana io. Hisy fivarotana tapakila efatra ihany koa hialana hatrany amin’ny fifanosehana. Haseho eny aminn’ny fahitalavitra lehibe ny isan’ny tapakila lafo, amin’ny anaran’ny mangarahara.
Fibatana fonjamby- Lalao eran-tany :: Tafiditra folo voalohany ireo mpikatroka malagasy any Thaïland